संखुवासभामा एमाले अधिवेशन : चैनपुर बाहेक ९ पालिकामा सम्पन्‍न (कुन पालिकामा को ?) « Emakalu Online
संखुवासभामा एमाले अधिवेशन : चैनपुर बाहेक ९ पालिकामा सम्पन्‍न (कुन पालिकामा को ?)
संखुवासभा । संखुवासभामा चैनपुर नगरपालिका बाहेक अन्य ९ पालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमालेको पालिका स्तरीय अधिवेशन सम्पन्‍न भएको छ । संखुवासभाको १० पालिका मध्ये ९ पलिकामा पालिका स्तरीय अधिवेशन सम्पन्‍न भएको नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख बिनोद सुब्बा गुरुङले बताए ।
अधिबेशनबाट खाँदबारी नगरपालिकामा देबेन्द्र घिमिरे अध्यक्ष रहेको नयाँ कमिटि गठन भएको छ ।जसको उपाध्यक्षमा जेबिंन राई सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।त्यस्तै मादी नगरपालिकाको अध्यक्षमा जिबन लिंङथेप चयन भएका छन् । धर्मदेबिमा सुर्य पौडेल चयन भएको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताए ।
उता पाँचखपन नगरपालिकामा गोपाल श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएका छन् । त्यस्तै सिलिचोङ गाउपालिकामा मेनुका राई, मकालु गाउपालिकामा तारा कुमार गुरुङ, चिचिला गाउपालिकामा लोक बहादुर घले चयन भएका छन् ।
भोटखोला गाउपालिकामा चिम्साङ भोटे अध्यक्ष चयन भएका छन् । भने सभापोखरी गाउपालिकाको अध्यक्षमा तिर्थ भट्टराई र उपाध्यक्षमा सुमन श्रेष्ठ चयन भएको नेकपा एमालेका पार्टी कार्यालय सचिब नारायाण कटुवालले जानकारी दिए । यता चैनपुर नगरपालिकामा छलफल भईरहेको छ ।